एकाबिहानै म्याग्दीबाट आयो यस्तो दु:खद खबर ! गाउँलेको भा’गाभा’ग भयो ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/एकाबिहानै म्याग्दीबाट आयो यस्तो दु:खद खबर ! गाउँलेको भा’गाभा’ग भयो !
२६ असार, बेनी । लगातारको वर्षासँगै पहिरो जाँदा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको रिखामा आज बिहान सात जना बे’पत्ता भएका छन् । घण्टीवाङ भन्ने ठाउँबाट ख’सेको पहिरोले दुई परिवारका सात जना बे’पत्ता भएका मराङका वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भीमप्रसाद जुग्जाली र धनबहादुर जुग्जालीको घर पहिरोले ब’गाएको छ । भीमप्रसादको घरमा चार र धनबहादुरको घरमा तीन जना थिए ।
भिरालो पाखोमा रहेको घण्टीवाङ गाउँ पहिरोले घेरिएको स्थानीयवासीसमेत रहेका वडासदस्य लोकबहादुर पुनले बताए । माथिल्लो भागमा रहेको घण्टीवाङका १३ परिवार पहिरोले विस्थापित भएको उनले बताए । घण्टीवाङ मुनीको रिखामा छ घरको बसोबास थियो । त्यहाँका चार घर विस्थापित भएका छन् । ‘गाउँबाट बाहिर निस्कने सबै बाटो पहिरोले ब’गाएको छ’, वडासदस्य पुनले भने, ‘पहिरो ख’सिरहेकाले हामीहरुको पनि भा’गाभा’ग छ ।’
यसैगरी मराङकै कल्लेनीको धारखोलामा आएको बाढीले दुई वटा घर बगाएको छ । वीरबहादुर पुन र परदेवी पुनको घर बगाएको स्थानीय भुवानी पौडेलले जानकारी दिए । घरका मानिसले भागेर ज्यान बचाएका छन् । भाग्ने क्रममा एक जना घा’इते भएका छन् ।
बेनी–जोमसोम सडक खण्डको बेलिब्रिज ब’ग्यो
यसैबीच रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हँुदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको राहुघाटस्थित बेलिब्रिजसमेत बगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए । नदीको कटानका कारण बेलिब्रिजको राहुघाटतर्फको जिप भ’त्काएर बगाएको हो ।
सो पुल म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वर र रघुगङ्गा गाउपालिका–३ राहुघाटको सिमानामा पर्छ । बेलिब्रिज बगाएपछि रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङ जिल्ला सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको छ ।
गलेश्वरका स्थानीय दीपक कार्की बिखर्चीले ठेकेदारले पक्की पुल बनाउन ढिलाइ गर्दा बेलिब्रिज कटानको जो’खिममा परेर बगाएको बताए । बेलिब्रिजको छेउमा पक्की पुल निर्माणको क्रममा छ । पहिरो प्र’भावित मराङको रिखा र कल्लेनीमा ताकम, दरवाङ र बेनीबाट प्रहरी टोली पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक किरनजङ्ग कुँवरले बताए । प्रहरी टोली घ’टनास्थल पुगेपछि विस्तृत जानकारी आउने उनको भनाइ छ । फोटो फाइल
ख्याल गर्नुहोला उपत्यकामा यस्ता सवारीसाधनलाइ कारवाही गरिने
सपना र बिनय छु,टि,नुको पछाडि कसैले नसोचेको र,ह,स्य,आखिर के हो त बास्तबिकता.?
कप्तान मल्लका बुवाको निधन
फेरि ईण्डियन लाहुरेले के गरे यस्तो, लाहुरेनी रु,दैं मिडियामा